तपाईं सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ ? अबदेखि काम सुरु गर्नु अघि वाचन गर्नुपर्ने एउटा | Ekhabar Nepal
काठमाडौं । तपाईं सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ ? यदि हो भने अबदेखि कार्यालय प्रवेश गरेपछि काम सुरु गर्नु अगाडि तपाईंले एउटा मन्त्र अनिवार्य रुपमा वाचन गर्नुपर्नेछ । त्यो मन्त्र हो– “म भ्रष्टाचार गर्दिन । म भष्टाचार हुन दिन्न । म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु ।”
कर्मचारी प्रशासनमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएपछि सरकारले यस्तो मन्त्र ल्याएको हो । जसलाई काम सुरु गर्नुअघि वाचन गर्नु अनिवार्य बनाइएको छ । अर्थात् सरकारी कर्मचारीले अबदेखि कार्यालय प्रवेश गरेपछि भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिज्ञा गरेर मात्र काम सुरु गर्नुपर्ने छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले यस्तो निर्णय गर्दै परिपत्र जारी गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिज्ञा गरेर मात्र काम प्रारम्भ गर्न भन्दै सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई पत्र पठाइसकेको छ । गत मंगलबार (असोज १६ गते) मुख्यसचिवले यस्तो निर्णय गरेका हुन्, जसलाई भोलिपल्टै बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबै सरकारी निकायमा पठाएको थियो ।
“नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको व्यहोरा स्मरण गराउँदै सुशासन र सदाचारको प्रवर्द्धन गर्न कामप्रति इमान्दार भइ प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीले दैनिक काम प्रारम्भ गर्नुअघि “म भ्रष्टाचार गर्दिन । म भ्रष्टाचार हुन दिन्न । म देश र जनताको लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने प्रतिज्ञा वाचनपश्चात कार्य प्रारम्भ गर्ने गराउने,” मुख्य सचिवको निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबै सरकारी निकायमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले उक्त मन्त्रलाई लिखित स्टिकर वा ब्यानर बनाइ प्रत्येक सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको अगाडि देखिनेगरी टाँस्न समेत भनेको छ । कर्मचारीले सोही स्टिकर हेरेर प्रत्येक दिन कार्य प्रारम्भ गर्नुअघि वाचन गर्नुपर्नेछ । “कर्मचारीले चिच्याएर वाचन गर्नुपर्दैन । मनमनै वाचन गरे हुन्छ,” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता विनोद बहादुर कुँवरले बाह्रखरीसँग भने, “सुशासन र सदाचारको प्रवर्द्धन गरी भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न यस्तो गरिएको हो ।”
केहीसाताअघि राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक भ्रष्टाचार मौलाएको कुरा उठेको थियो । त्यसपछि उक्त बैठकमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीमा रहेको भ्रष्टाचार समस्यालाई सम्बोधन गर्न मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसैअनुरुप मुख्य सचिवले गत मंगलबार कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिज्ञा गरेर मात्र दैनिक कामकाज सुरु गनुपर्ने निर्णय गरेका हुन् ।